Sports – Page 35 – सकारात्मक परिवर्तनवाहक विचार, कला/साहित्य र सत्य खवरको बाटाे
सन्यास फिर्ता लिएको पहिलो खेलमा मेस्सीले जिताए अर्जेन्टिनालाई
काठमाडौं । स्टार स्ट्राइकर लियोनल मेस्सीको गोलसँगै अर्जेन्टिनाले विश्वकप फुटबलको दक्षिण अमेरिकी छनोटमा उरुग्वेलाई १–० ले पराजित गरेको छ । अप्रत्यासित रुपमा सन्यासको घोषणा गरेका मेस्सी फेरि अर्जेन्टिनाको जर्सीमा मैदान फर्किएको पहिलो खेलमा नै गोल गर्दै टिमलाई जित दिलाएका हुन् । शुक्रबार विहान भएको खेलमा अर्जेन्टिनाका लागि घरेलु मैदानमा मेस्सीले ४३ औं मिनेटमा गोल गरेका […]
आजिवन प्रतिबन्ध लगाइएका खेलाडीको अपिल खारेज
काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय फुटवलमा आजीवन प्रतिबन्ध लगाइएका चार नेपाली फुटबल खेलाडीले गरेको पुनःविचारको अपिल एशियाली फुटबल महासंघ (एएफसी) ले खारेज गरिदिएको छ । एएफसीको अपिल कमिटीको बिहीबार बसेको बैठकले चार खेलाडी र एक प्रशिक्षकको अपिल खारेज गरिदिएको हो। एएफसीले नेपाली टोलीका तत्कालीन प्रशिक्षक अन्जन केसी, तत्कालीन कप्तान सागर थापा, विकास सिंह क्षेत्री, रितेश थापा, सन्दिप […]
Posted in: National News, SportsLeaveacomment
Three Star shares 1-1 draw against Cambodia’s Nagaworld FC
Kathmandu . Nepal’s Three Star Club has shared 1-1 draw against Cambodia’s Nagaworld FC in their second Group B match of the AFC Cup 2017 Play-off Qualifiers on Tuesday. The match was played at Football Centre MFF, Ulaanbaatar in Mongolia Nagaworld FC had takenalead in 27th minute. However, Three Star’s foreign recruit Martins leveled the […]
Posted in: English News, SportsLeaveacomment
ओलम्पिकमा ४६ स्वर्णसहित अमेरिका पहिलो, बेलायत दोस्रो र चीन तेस्रो
काठमाडौं । रियो ओलम्पिकको अन्तिम स्वर्ण पदक पनि जितेको अमेरिका पदक तालिकाको शीर्ष स्थानमा रहँदै प्रतियोगिता सकाएको छ । कुल ४६ स्वर्ण, ३७ रजत र ३८ सहित १२१ पदक जितेको अमेरिका पहिलो भएको छ भने २७ स्वर्ण, २३ रजत र १७ कास्य हात पारेको बेलायत दोस्रो तथा २६ स्वर्ण, १८ रजत र २६ कास्य सहित […]
रियो ओलम्पिकको भव्य समापन, अब २०२० मा टोकियोमा
काठमाडौं । ब्राजिलको रियो दि जेनेरियोमा भएको ३१ औं गृष्मकालीन ओलम्पिक भव्य रुपमा सम्पन्न भएको छ । एतिहासिक रियो दि जेनेरियो रंगशालामा आयोजित भव्य समारोहबीच औपचारिक समापन भएको हो । यसपटक ओलम्पिक खेलकुद समापनमा ल्याटिन अमेरिकी सभ्यता र संस्कृती झल्कने विभिन्न प्रस्तुती राखिएका थिए । ब्राजिलमा बढ्दो आर्थिक संकट, प्राणघातक जिका भाईरसको त्रास, विश्वभर नैं […]
﻿ सातौं राष्ट्रिय खेलकुदमा ४ हजार ४४५ खेलाडी
काठमाडौं । सातौं राष्ट्रिय खेलकुदमा ४ हजार ४ सय ४५ खेलाडी सहभागी हुने भएका छन् । सातौं राष्ट्रिय खेलकुद कार्यकारी समितिका अध्यक्ष समेत रहेका राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) का सदस्य–सचिव केशवकुमार विष्टको अध्यक्षतामा आइतबार सातदोबाटोमा बसेको बैठकले उक्त निर्णयक गरेको राखेपका प्रेस सल्लाहकार रोहितकुमार दाहालले जनाएका छन् । जिल्ला, क्षेत्र छनोट पार गर्दै १ हजार […]
रियो ओलम्पिकमा तेक्वान्दोकी निशाले चिनियाँ जेङ संग भिड्ने
काठमाडौं । ब्राजीलमा जारी रियो ओलम्पिक अन्तर्गत नेपालकी तेक्वान्दो खेलाडी निशा रावलले शनिबार प्रतिस्पर्धा गर्दै छिन् । उनले ६७ केजीमाथिको तौल समूहमा अन्तिम १६ को खेलमा प्रतिस्पर्धा गर्न लागेकी हुन् । खेल बेलुका पौने ८ बजे हुनेछ । निशाले चीनकी जेङ शुयिङसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने छिन् । निशाले पहिलो पटक ओलम्पिकमा प्रतिस्पर्धा गर्न लागेकी हुन् । […]
नेपाली क्रिकेट टोलीको विमानस्थलमा यस्तो प्रतिक्रिया
काठमाडौं । आइसिसी विश्व क्रिकेट लिग च्याम्पियनसिप अन्तर्गत नेदरल्यान्डस् संगको खेल खेलेर नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोली स्वदेश फर्किएको छ । नेपालले नेदरल्यान्ड्मा घरेलु टोलीसँग जारी लिगको चौथो चरणअन्तर्गत दुई खेल खेलेको थियो जसमा एक जित र एकमा हार बेहोरेको थियो । गत साउन २९ गते भएको पहिलो खेलमा नेदरल्यान्ड्ससँग ७ विकेटले पराजित भएको नेपालले दोस्रो […]
मेस्सीको गोलसँगै नयाँ सिजनमा बार्सिलोनाको पहिलो उपाधी
काठमाडौं । स्पेनिस सुपर कपको उपाधि बार्सिलोनाले हात पारेको छ । ला लिगा च्याम्पियन बार्सिलोनाले बिहीबार बिहान भएको सुपर कपको दोस्रो लेगमा सेभिल्लालाई ३–० ले हराउँदै समग्रमा ५–० को जितसहित यो सिजनको पहिलो उपाधि जितेको हो । नाउ क्याम्पमा भएको खेलमा लियोनल मेस्सीको पासमा तुरान स्लोटेडले गोल गर्दै बार्सिलोनालाई सुरुवाति अग्रता दिलाएका थिए । बार्सिलोनाका […]
ओलम्पिक पदक तालिकामा अमेरिकाको अग्रता कायमै, चीन तेस्रोमा
काठमाडौं । ब्राजिलको रियो दि जेनेरियोमा जारी ३१ औं गृष्मकालीन ओलम्पिकको पदक तालिकामा अमेरिकाले आफ्नो अग्रता कायमै राखेको छ । अमेरिका २६ स्वर्ण पदकसहित शीर्ष स्थानमा छ भने १६ स्वर्ण जितेको बेलायत दोस्रो स्थानमा तथा १५ स्वर्ण जितेको चीन तेस्रो स्थानमा छ । त्यसैगरी ११ स्वर्ण जितेको रुस चौथो स्थानमा रहँदा ८–८ स्वर्ण पदक जितेका […]